Samir Nasri: Kubbada Cagtu Waa Aduunyo Munaafiqiin Ah | Raadgoob
Samir Nasri: Kubbada Cagtu Waa Aduunyo Munaafiqiin Ah
Xidigii hore ee xulka qaranka France iyo kooxaha Manchester City & Arsenal ee Samir Nasri ayaa ka sheekeeyay xaalad murugo badan oo kubbada cagta ku soo martay intii uu ku dhex jiray waayihiisa ciyaareed. Nasri oo waqti fiican ku soo qaatay horyaalka Premier League isla markaana ka mid ahaa xulka qaranka France ayaa shaaca ka qaaday waqti uu dhiman gaadhay isla markaana uu waayay taageeradii uu kubbada cagta ku haystay marka uu ciyaarayay.
Samir Nasri ayaa kubbada cagta ku tilmaamay aduunyo munaafiqiin ah isaga oo ku dooday in markii uu ka tirsanaa kooxda Marseille uu soo wajahay xanuun ku dhaca xuubka maskaxda ama lafta xangulada loo yaqaan ee isku xidha min madaxa ilaa dhabarka.
Nasri ayaa sheegay in 12 maalmood uu yaalay cisbitaal markii uu ka tirsanaa kooxda ree France ee Marseille markaas oo uu ku dhawaaday in uu dhinto. Xidigii hore ee France, ayaa sheegay in markii uu garoonka la soo galayay kooxda Marseille in si wayn loo taageerayay balse markii ay dhibtu soo gaadhay uu dadkii waayay.
Samir Nasri oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Kubbada cagtu waa aduunyo munaafiqiin ah. Laakiin waxaan awoodaa in aan naftayda muraayada ku eego, waxaan ogahay in aan sii ahaanayo mid sharaf leh in aan ahaaday cida aan ahay. Qaar ayaa sheegi kara in aan ahay qof isla wayn ama in aan sharaf leeyahay, laakiin anigu waxaan ahay nin furfuran”.
Samir Nasri oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Haddii aad ijeceshahay waa sax, haddii aanad aniga jeclayn sidoo kale waa sax, laakiin ugu yaraan waxaad ogtahay waxa ay tahay in aad iga qaadato. Anigu dad isku mid ah ayaan waydiiyay sababtoo ah anigu ma jecli in isla waynidu ay kubbada cagta qayb ka noqoto”.
Intaa kadib Samir Nasri oo u waramayay Calan+ ayaa ka hadlay waqtigii uu xaalada adag ee xanuun soo maray wuxuuna yidhi: “Intii lagu jiray sanadkaygii ugu danbeeyay Marseille, waxaan anigu cisbitaalka aalay 12 maalmood oo aan qabay xanuunka ‘meningitis'(xanuun ku dhaca xuubka maskaxda iyo xangulada) isla markaana waxaa arkay dhinaca dhabta ah ee dadka”.
Nasri oo sharaxaadiisa sii wata ayaa yidhi: “Waxaan arkay kuwii aniga i taageerayay markii ay wax walba sida fiican u socdeen, markii aan ahaa qiimaha Marseille, markii aan ciyaarayay xili ciyaareedka halkaas oo aan ku noqday heer caalami, dadku markaas way idaba joogeen, laakiin markii aan xanuunsanayay 12 maalmood ee aan dhiman gaadhay muu jirin qof halkaas joogay”.